China Electronic Connector Components စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Jitai
Opto-Electronic Package ကို
အီလက်ထရောနစ် Connector အစိတ်အပိုင်းများ
အဓိကထုတ်ကုန်များမှာပေါင်းစပ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆားကစ်များ၊ အော်တိုအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ လှိုင်းစစ်ထုတ်ကိရိယာများ၊ အာရုံခံကိရိယာနှင့်စွမ်းအားမြင့်ကိရိယာများအတွက်သတ္တုအထုပ်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်စစ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးအတွက်အသုံးချနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀ န်ကြီးဌာနအဆင့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနစီမံကိန်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူများမှအသိအမှတ်ပြုသည်။
လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများသည်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးတွင်လိုအပ်သောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ကေဘယ်ကြိုးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြားအသုံးပြုသောရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောအချက်ပြမှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက်အချက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ လက်နက်၊ ရေယာဉ်၊ အီလက်ထရွန်နစ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကွန်ပြူတာ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနံရှာဖွေခြင်းနှင့်စသည်တို့တွင်စစ်သုံးအရပ်ဘက်စက်မှုလုပ်ငန်းများလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးများတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ တက်ကြွခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ။
Microelectronic connectors သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်ထဲတွင်ရှိခဲ့ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် jack ၏ပစ္စည်းများသည်အနိမ့်အမြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေဝါယာကြိုးများကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက် Ni မှ plplate underplate ဖြစ်ပြီး Au electroplate ။ electroplating ပြီးနောက်မျက်စိအပေါက်၏မညီမညာဖြစ်နေသောပန်းကန်ကြောင့်မျက်စိတွင်းသည်ငါတို့အတွင်းပိုင်းအဆုံး၏မျက်မမြင်အပေါက်ဘေးတွင်ဒေါင်လိုက်အပေါက်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အ ဦ များပါ ၀ င်သောလျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းပုံမှန်အတိုင်းနိမ့်ကျသော characteristics လက္ခဏာများရှိသည်။
၁။ မြင့်မားသောအစားထိုးမှု၊ ပုံစံတစ်ခု၊ ကြင်နာမှု၊ သတ်မှတ်ချက်၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလျှပ်စစ် connector အမြောက်အများ၊ ယင်း၏ plug နှင့် stock တို့သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထည့်။ လိုအပ်သောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာစသည်တို့ကိုရရှိနိုင်သည်။
ထိတွေ့မှု 2.Good အသိ၊
3.Anti-misinsert function ကို
5.High-Security - မြင့်မားသောလျှပ်ကာခံခုခံနိုင်မှုနှင့်စွမ်းအားဆန့်ကျင်မှုလုံလုံလောက်လောက်မြင့်မားပါသည်
ဝန်စွမ်းရည်မှတဆင့် 6.High ခုခံ
စနစ်တကျအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတောင်းဆိုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအားထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
၁. လျှပ်စစ်အချက်ပြ: ပတ် ၀ န်းကျင်ဗို့အား၊ သတ်မှတ်ထားသောလက်ရှိ、 အဆက်အသွယ်ခုခံခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်စသည်တို့။
2. စက်ကိရိယာ: တုန်ခါမှု၊ ထိတ်လန့်မှု၊ သပိတ်မှောက်မှု၊ စက်မှုသက်တမ်း၊
ပတ်ဝန်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်သတ်မှတ်ချက် - ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်、 စိုထိုင်းဆ、 လေဖိအား、 အပူချိန်စျေး shock သံတံဆိပ်、 cor ခြစားမှုနှိမ့်ခြင်း။
၄. လုံခြုံစိတ်ချရသောသတ်မှတ်ချက် - ကာကွယ်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း、 ဗို့အားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း、 မီးဘေးခုခံခြင်းနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်
5.Termination နည်းလမ်း: ကြေးဝါ、 crimp、 ဝါယာကြိုး - ထုပ်ပိုးဆက်သွယ်မှု、 pre- insulator တွင်လည်းဆက်သွယ်မှုနှင့်စသည်တို့ကို
7. ချိတ်ဆက်မှု、 သော့ခတ်ခြင်းနည်းလမ်း: Plug-In、 ဝက်အူ、 ဘရွန်း、、 တွန်း၊ ဆွဲ、、 လက်မောင်း、 ကတ်သော့ခတ်စသည်
8.Mount နည်းလမ်း: အနားကွပ်စက်ဝိုင်း、 ကေဘယ်၊ ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာ rew ဝက်အူ、 ကြေးဝါစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၉။ သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်ချက် - အခန်းအရွယ်အစား - ine မှားယွင်းသောဆန့်ကျင်မှုတည်ဆောက်ပုံဖွဲ့စည်းပုံ right မှန်ကန်သောညွှန်ပြမှုနှင့်အခြားအရာများကိုချိတ်ဆက်ပါ။
၁၀။ အမြီးချိတ်တွဲဖွဲ့စည်းခြင်း： ပြားအမျိုးအစား、 မြှုပ်နှံအမျိုးအစား、 ဝက်အူပုံစံ、 ရောနှောအမျိုးအစား、 ဒိုင်းအမျိုးအစားနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၁၁။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်、 အလေးချိန် - လေကြောင်းနှင့်အာကာသတွင်အသုံးပြုသောလျှပ်စစ် connector သည်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုမေးမြန်းသည်၊ အများအားဖြင့်အလေးချိန်နိမ့်သော Aluminum အလွိုင်းအထုပ်အထုပ် connector နှင့်စုစုပေါင်းပစ္စည်းအထုပ် connector ကိုရွေးချယ်ပြီးအလေးချိန်သည် Aluminum alloy အထုပ်၏သတ်မှတ်ချက်ထက် ၃၀% လျော့နည်းသည်။
နောက်တစ်ခု: Opto-Electronic Package ကို
အီလက်ထရောနစ် Connector Compnents
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖိုက် mode ကို
Plug-In ကို Sidewall အထုပ်